ပင်လုံညီလာခံကဲ့သို့သော တိုင်းရင်းသားများ၏ တွေ့ဆုံနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ညီလာခံခေါ်ယူရေး > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / အယ်ဒီတာ့အာဘော် / ပင်လုံညီလာခံကဲ့သို့သော တိုင်းရင်းသားများ၏ တွေ့ဆုံနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ညီလာခံခေါ်ယူရေး
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ November 22, 2011 အယ်ဒီတာ့အာဘော်3Comments 206 Views
နှစ်ပေါင်း (၅၀) ကျော် (၆၀) နီးပါး တိုင်းပြည်အတွင်း အခြေအနေ မတည်ငြိမ်မှုကြောင့်လည်းကောင်း အစိုးရအဆက်ဆက်မှ တိုင်းရင်းသားတို့၏ ပုန်ကန်တော်လှန်နေမှုကို ဖြေရှင်းလိုသည့်ဆန္ဒ မရှိသောကြောင့်လည်းကောင်း ပြည်တွင်းစစ်နှင့်အတူ တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေး၊လူမှုရေးမှအစ ကဏ္ဍအသီးသီတို့တွင် အစစအရာရာ နောက်ကျခဲ့ရပေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်။ ပုံ (bellenews.com)
လက်ရှိ သမတဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူ့လွတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွတ်တော်တို့တွင် ထိုင်ခုံရရှိုထားသည့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအမတ်များသည် တိုင်းရင်းသားအရေးကိစ္စကို ကောင်းမွန်နားလည်ထားသူများ မဟုတ်ကြပေ။ ထိုပါတီမှ တပ်မတော်သားဟောင်းလွှတ်တော်အမတ်များသည် တိုင်းရင်းသားများအပေါ် စစ်ပြုခဲ့သူများ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ၄င်းတို့ မှာ အဘယ့်ကြောင့် ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ကို နားလည်ကြသူများ မဟုတ်သကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ပြည်သူများအပေါ် ‘ရန်သူ’ သဖွယ် မြင်နေသူများလည်း ဖြစ်နေပေသည်။
လက်ရှိအစိုးရသည် ဒီမို်ကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို အထူးလိုလားစွာ ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း တကယ့်စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားတို့၏ အရေးကိစ္စကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ ယခုအခါမှစတင်ပြီး သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရသစ်မှ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိနေပေသည်။
ဦးသိန်းစိန်အပါအဝင် လက်ရှိမြန်မာ့တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်းတို့သည် တိုင်းရင်းသားများအပေါ် မည်မျှနားလည်ပါသနည်း၊ မည်မျှစေတနာရှိပါသနည်း စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်နေပေသည်။ လက်ရှိဦးသိန်းစိန်အစိုးရအပါအဝင် စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်အား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေခြင်းသည် သောင်းကျန်းမှုဟုသတ်မှတ်ထားကြပြီး တိုင်းရင်းသားတို့၏ မကျေနပ်ချက်နှင့်တကွ ၄င်းတို့၏ အခွင့်အရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေမှုကို အသိအမှတ်မပြုလိုပေ။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို စေတနာရိုးသားစွာ အကောင်အထည်ဖော်လိုမည်ဆိုပါက ပြဿနာတို့၏အရင်းအမြစ်များကို လေ့လာသင့်ပေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးစသည်တို့ကို မြန်မာ့တပ်မတော်ကသာလျှင် ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ (၁၉၆၂) တပ်မတော်၏အာဏာသိမ်းပွဲသည် တိုင်းရင်းသားတို့၏ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပြယုဂ်ဖြစ်သော ပင်လုံညီလာခံ၏ သဘောတူညီချက်များကို ရုတ်သိမ်းလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်ပေသည်။ ပင်လုံညီလာခံ သဘောတူညီချက်တွင် ဗမာခေါင်းဆောင်များနှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တို့အကြား စစ်မှန်သောပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက် သဘောတူညီချက်များ ရှိခဲ့ကြသည်မဟုတ်ပါလော။
စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတွင် တိုင်းရင်းသားဒေသအတွင်း တိုင်းရင်းသားတို့၏ အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိစေရန် အာမခံထားမှုကို ဗမာ့တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များကသာလျှင် ဖျက်ဆီးခဲ့ပေသည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အနေဖြင့် အတိတ်ကသမိုင်းကြောင်းကို ကောင်းမွန်ကြေညက်စွာ နားမလည်ပါက သို့တည်းမဟုတ် နားလည်အောင် မကြိုးစားပါက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ အစည်းများအားလုံးမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားကြသူများဖြစ်ပေသည်။ မိိမိတိုင်းရင်းသားတို့၏မွေးရာပါအခွင့်အရေးအတွက် မလွဲမရှောင်သာ လက်နက်ကိုင်နေကြရသည့်သူများလည်း ဖြစ်သည်။
မကြာခင်ကာလအတွင်း ထိုလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှာ အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ရယူကြမည်ဖြစ်သည်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသည် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၏ ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်း သမ္မတမှ ခံယူရပေမည်။ ထိုမှတဆင့် တိုင်းရင်းသားတို့၏ လိုလားချက်များကို သိရှိနိုင်ရန် ပြည်နယ်အလိုက် လူထုဆွေးနွေးပွဲများ နိုင်ငံရေး လူမူရေး ဖွံ့ဖြိုုးရေးဆွေးနွေးများကို အစိုးရမှခွင့်ပြုကာ တိုင်းရင်းသားတို့၏ အသံကို အသိအမှတ်ပြုပေးသင့်သည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်အနေဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် ဗမာ့တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များနှင့် တိုင်းရင်းသားတို့အကြား နားလည်မှုရရှိရန်၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရန်၊ ＂ပင်လုံညီလာခံ ကဲ့သို့ သော တိုင်းရင်းသားများ၏ တွေ့ဆုံနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ’’ တရပ်ကို ရိုးသားသောစေတနာဖြင့် ကျင်းပပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပေသည်။
Previous မွန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ (MNDF) ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း
Next တိုင်းရင်းသားအရေးအတွက် စောင့်ကြည့်ရဦးမည်ဟု မွန်နိုင်ငံရေးလေ့လာသူများပြော
Editor’s article is too sophisticated for the Generals.. “Pang Long” is not in the Generals dictionary. It is for them justasmall town in Southern Shan state. Look at the government’s newspaper and media in the past 50 years.. They never mentioned “Pang Long ” asapolitical meaningful words. Instead they used “Pyidaung su” which for them is only colorful dances of the girls who entertain them. Nothing more. All the army leaders are trained not to be leaders. They are brainwashed to neglect “Pang Long ” only asasmall town, Federalism is taught as synonymous with disintegration.
Ex general Aung Min hinted possiblePang Long in Nay Pyidaw. If Thein Sein and the ex generals doesn’t change their mind set, It will be only another rubber stamp Pang Long like National Convention.
I has seenashort documentary about catching an elephant and taming them.The catcher drives the elephants by
– staring loud noises and driving the elephants towards the trap “Sin Kyone”
– Elephants once inside the structure cannot turn back bounded byastrong narrow wall
– The trainers feed the elephants alternatively prodding with machete.
– Trainers also get the help of trained elephants to guard the wild ones.
They are very good and experienced at catching elephants. Now they have halfadozen sinphyu to boast about.
I really believe that only the ethnic people and very few(like Bo Gyoke Aung Sann) Myanmar understand the spirit of Pin Lone.
Even DASSK knows less than the ethnic people, sorry Daw Su I just repeat what you have heard during your campaign in Taunggyi. If you can swallow that bitter medicine , the spirit of Bo Gyoke will revive again in your soul.Daw Su and NLD just mentioned Pin Lone at the right time, dutifully but commitment is doubtful because they did not suffer like ethnic people. Just take time to look deeply at sufferings, humiliations of the ethnic people at the hand of Tat ma daw to understand the ethnic people.
.. The ethnic people shouts Pin Lon from their heart, Bama mumbles from their lips and the generals at the point of their guns.
When I say Federalism, don’t interpret it in the same old way. The ethnic people cannot have 100% Federalism, the generals can no longer disguise 2008 constitution as Pyidaungsu, NLD & Ethnic leader should be ready to lecture the Generals to brainwash them again.Sorry if ex generals are insulted.
Every faction should sacrifice No one can get their ideal, but people will get peace.
I write this comment not out of hatred of any faction, my wish for every body is to respect and adopt new Pin Lone as the OLD PINLONE from 1947.
What kind of font do I need read this news? I need your help, please.
We are using Unicode, That Font support Mon, Burmese, Shan, Karen, .. language. Most update Browser are working under fontface i think please update your browser.
need font : TharLon.ttf